China SPC ကြမ်းခင်း Panel များထုတ်လုပ်သူနှင့်ထောက်ပံ့သူ ရွှေတံဆိပ်
SPC ကြမ်းခင်းသည်ဇိမ်ခံဗီနိုင်းကြွေပြားများ (LVT) ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သစ်သားကြမ်းခင်းဖုံးအုပ်မှုအသစ်ဖြစ်ပြီးLVT。SPCကြမ်းခင်းထက်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ပိုမို၍ တာရှည်ခံသည်။ အဆင့်မြင့် PVC နှင့်သဘာဝကျောက်တုံးအမှုန့်များကိုကလစ်သော့ခတ်ပူးတွဲပါသောအလွှာ၊ ကွန်ကရစ်၊ စသည်တို့
CUPLE HUNDREDS သည် STOCK တွင်အရောင် (သို့) Customers နမူနာများအနေဖြင့် Customized
၃.၀ မီလီမီတာ၊ ၄.၀ မီလီမီတာ၊ ၄.၂ မီလီမီတာ၊ ၅.၀ မီလီမီတာ၊ ၆.၀ မီလီမီတာ၊
ခရမ်းလွန် (Matt, Semi-Matt, အလင်း)
လူနေအိမ် ၂၅ နှစ်၊ စီးပွားဖြစ် ၁၀ နှစ်
SPC ကြမ်းခင်း panel အကျိုးကျေးဇူးများ -
အာဏာပိုင်များအဆိုအရထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများ၏ 95% အဆိပ်အတောက်အငွေ့နှင့်ဓာတ်ငွေ့ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့မီးထဲမှာမီးရှို့ခံခဲ့ရသည်။ SPC ကြမ်းခင်း၏မီးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည် NFPA CLASS B ဖြစ်သည်။ အလိုအလျောက်လောင်ကျွမ်းခြင်းမဟုတ်ပါ၊ မီးလျှံကို ၅ စက္ကန့်အတွင်းအလိုအလျောက်ထွက်သွားစေပြီးအဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေနိုင်သောဓာတ်ငွေ့များဖြစ်ပေါ်စေမည်မဟုတ်ပါ။
3. အဘယ်သူမျှမ Formaldehyde
SPC သည်အရည်အသွေးမြင့်မားသောကျောက်စွမ်းအင်နှင့် PVC ဗဓေလသစ်ဖြစ်ပြီးအန္တရာယ်ရှိသောပစ္စည်းများဖြစ်သောဘင်ဇင်နင်၊
၄။ သတ္တုမရှိ၊ ခဲဆားမရှိပါ
SPC ၏တည်ငြိမ်စေမှုသည်ခဲဆားငန်လေးသောသတ္တုများမဟုတ်သည့်ကယ်လ်ဆီယမ် (zinc) ဖြစ်သည်။
5. Dimensionally တည်ငြိမ်သော
အပူချိန် ၈၀ ဒီဂရီထိ ၆ နာရီ - ချုံ့≤ ၀.၁%၊ ≤ 0.2mm Curling
SPC ကြမ်းခင်းတွင်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသည့် wear-resistance အလွှာရှိပြီးအပြောင်းအလဲသည်အလှည့် ၁၀၀၀၀ ကျော်မြင့်တက်သည်။
SPC ကြမ်းခင်းသည်အထူးမြင်းစီးခြင်းခံနိုင်ရည်ရှိပြီးကြမ်းပြင်၏ ၀ တ်စားဆင်ယင်မှုအလွှာရှိသည်။ ဘုံကြမ်းခင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက SPC ကြမ်းခင်းသည်စိုစွတ်သောအခါတွင်ပွတ်တိုက်အားပိုမိုမြင့်မားသည်။
အစဉ်အလာ LVT နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် SPC ကြမ်းခင်းသည်ထူးခြားသောအားသာချက်ရှိသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်ကြမ်းခင်းဖြစ်သောကြောင့်၊
ဤအမျိုးအစားကြမ်းခင်းဘုတ်ကိုလျင်မြန်စွာတပ်ဆင်နိုင်သည်၊ တစ်နေ့လျှင်အလုပ်သမား ၂ ယောက်ကို ၅၀၀ m2 တပ်ဆင်နိုင်သည်။
စက်ရုံareaရိယာသည် ၁၂၀၀၀ စတုရန်းမီတာကျော်ရှိပြီးနံရံနှင့်ကြမ်းခင်းတွင်အပြည့်အဝအလိုအလျောက်ထုတ်လုပ်သည့်လိုင်းများရှိသည်။ တရုတ်နိုင်ငံ၏ပထမဆုံးသစ်သားသစ်သားပလတ်စတစ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများအနေဖြင့် R&D ခေါင်းဆောင်များအနေနှင့် Goldrain သည် ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှစ၍ နိုင်ငံတော်၏သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်ရေးစစ်ဆေးမှုကိုနှစ်စဉ်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
နောက်တစ်ခု: မိုးလုံလေလုံကြွေပြားဘုတ်အဖွဲ့ WPC